Mayelana NATHI - Eecycle Tianjin Technology Co., Ltd.
I-Eecycle Tianjin Technology Co., Ltd ibhizinisi elihlanganisiwe lobuchwepheshe obubandakanya ukuklama, ukukhiqiza, ukuthengisa nokusebenza kwebhayisikili nebhayisikili kagesi. Imboni yethu itholakala eDongli esifundeni saseTianjin, eceleni kwesikhumulo sezindiza saseTianjin Binhai, futhi ibanga elingama-30km kuphela ukusuka esiteshini saseTianjin nasethekwini laseTianjin, kungakusiza ukuthi ulondoloze impahla ethile yasekhaya.
Sinobuchwepheshe obunamalungelo obunikazi abangu-12 basekhaya nakwamanye amazwe mayelana nebhayisikili nebhayisikili kagesi (kufaka phakathi ukubonakala kwelungelo lobunikazi, imodeli yokusetshenziswa kobunikazi nokusungulwa kwephathenti njll) Sithuthukise amamodeli ahlukahlukene ayi-13 ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Ikakhulukazi ibhethri lethu elizenzele ukuzimela, ibhayisikili likagesi eligoqeka kathathu ngumkhiqizo wokuqala wasekhaya nowakwamanye amazwe nomkhiqizo oyingqayizivele emhlabeni.
Ifektri yethu isungulwe ngo-2008, sizibophezele ekuhlinzekeni amakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe ngemikhiqizo esezingeni eliphezulu nensizakalo esezingeni lokuqala. Sikhiqiza kakhulu futhi sicubungule ibhayisikili lezintaba ne-E-bhayisikili, ibhayisikili ledolobha ne-E-bhayisekili, ibhayisikili lamagiya angashintshi, ibhayisikili le-beach cruiser, ibhayisikili lezingane, ukugoqa ibhayisikili ne-E-ibhayisikili nohlaka lwebhayisikili njalonjalo. Sinesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-10 sokwenza ibhayisikili le-OEM ne-ODM kumakhasimende angaphandle. Ifektri yethu ine-workshop yethu yohlaka, i-workshop yokudweba, nokuhlanganisa i-workshop, ihlanganisa indawo engamamitha ayisikwele ayi-8000 futhi kunezinti ezingaphezu kuka-200.
I-Chongqing ZhenYouJin Technology Co., Ltd, ingumkhiqizi onguchwepheshe we-ebike enezimoto eziphakathi nendawo kanye nohlelo oluphelele lwedrayivu, ithengisa imikhiqizo yayo ye-AQL eYurophu, eChina, e-United States naseNingizimu Melika. Kusukela kusisekelo, sithathe ikhwalithi nensizakalo njengezikhiye zethu. Ngenxa yokuhlangenwe nakho kwethu okunzulu kanye nethimba lethu lokuthuthuka lonjiniyela abangaphezu kuka-20 abasuka enkampanini yabo kanye nakubaphakeli bethu abanobudlelwano bokubambisana obuvaliwe besikhathi eside.
Ngakho-ke, siyakwazi ukukhiqiza izingcezu ezingaphezu kuka-150,000 zebhayisikili elisizwa ngebhayisikili kagesi kanye nesistimu yedrayivu maphakathi nekhwalithi ephezulu njalo ngonyaka. Njengamanje, yonke imikhiqizo yethu ihambisana namazinga ekhwalithi aphesheya. Sizothembela kubuchwepheshe, imikhiqizo, amathalente kanye nezinzuzo zensizakalo ukuqinisekisa ukwaneliseka okugcwele kwamakhasimende.
※ Singabathengisi beChongqing ZhenYouJin Technology Co., Ltd.
Eminyakeni yentuthuko, ivolumu yethu yokuthekelisa yonyaka ifinyelele kuma-dollar ayizigidi ezingama-30 kanye nabalingani bethu kulo lonke elaseJapane, eSouth Korea, e-Indonesia nakwamanye amazwe aseNingizimu Mpumalanga, e-Europe, e-South America, e-United States, e-Switzerland, e-Middle East nakwezinye izifunda.
Amabhayisikili ethu asonga kathathu athenjiwe ngokujulile ngabasebenzisi basekhaya nabangaphandle. imikhiqizo emisha ivela emfuleni ongapheli. Ukuze sivikele amalungelo empahla yengqondo, sizohlinzeka ngemikhiqizo emangalisa kakhulu kumakhasimende adinga usizo.
Sibheke phambili ekwakheni ubudlelwano besikhathi eside nokubambisana namakhasimende emhlabeni wonke ngokususelwa ekwethembaneni nasezinzuzweni zombili. Siyakwamukela ngobuqotho efektri yethu!